Ireo mpanamboatra onjam-peo an-tserasera sy TSS sensor - Mpanamboatra sy mpamatsy sensor an-tserasera TSS
ZDYG-2087-01QX TSS fomba famafana hazavana miorina amin'ny fitambaran'ny fampidirana infrared, hazavana infrared navoakan'ny loharano maivana aorian'ny fanaparitahana ny turbidity ao amin'ilay santionany.
ZDYG-2088-01QX fantsom-pandrefesana hazavana momba ny turbidity mifototra amin'ny fampifangaroana ny fampidirana infrared, hazavana infrared navoakan'ny loharanom-pahazavana taorian'ny fanaparitahana ny turbidity tao amin'ilay santionany.
TC100 / 500/3000 Sensoran'ny Turbidity indostrialy
Ireo fantsom-pahantrana an-tserasera ho an'ny fandrefesana ny hazavana miparitaka an-tsokosoko mihantona amin'ny fatran'ny zana-ketsa tsy azo vahana ao anaty vatam-bary novokarin'ny vatana ary afaka manisa ny habetsaky ny singa bitika mihantona. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fandrefesana ny turbidity amin'ny Internet, ny toby famokarana herinaratra, zavamaniry rano madio, zavamaniry fitsaboana rano maloto, zavamaniry zava-pisotro, sampan-draharaha miaro ny tontolo iainana, rano indostrialy, indostrian'ny divay ary indostrian'ny fanafody, sampana fisorohana valanaretina, hopitaly ary departemanta hafa.
TCS-1000 / TS-MX Indostrialy fanodikodinan-tsolika